အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း - IME Holdings Group
IME Group သည် အောက်ပါစံနှုန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
Sustainable Development Goals. ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော SDG ရည်မှန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိသည်။
The Global Reporting Initiative. ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Global Reporting Standards များအားလိုက်နာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့် KPIs များနှင့် GRI standards များအား အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပြီး အကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်မည့် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိနိုင်သော အားလုံးပါဝင်သည့် လူထုတစ်ရပ်အား တည်ဆောက်လိုသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် အရေးပါပြီး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၅၀ ကျော်နှင့် suppliers ၁၃၀၀ ကျော်တို့နှင့် အတူတကွ ပူး‌ပေါင်းလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဝန်ထမ်း ၇၃ယောက် အား ရာထူးတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းသစ်ပေါင်း ၃၆၀ ထပ်မံခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦးများအား ဆောက်လုပ်လျှက် ရှိသည်။
IME ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသည် အဓိက ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ၃ခုအား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူလတ်တန်းစားများအတွက် လက်လှမ်းမှီနိုင်မည့် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ရောင်းချလျှက် ရှိသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူသူ ရာပေါင်းများစွာကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
ခိုင်မာသည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ‌အားဖြည့်ပါဝင်ခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုအား ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အလွန်အရေးပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုအား ဆန့်ကျင်နိုင်ရန်အတွက် zero-tolerance approach သတ်မှတ်ထားခြင်း။
ကုမ္ပဏီ၏ Code of Conduct ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအား ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း။